Ny sary tena izy voalohany an'ny Sony Xperia 2 dia voasivana | Androidsis
Navoaka ny sary voalohany an'ny Sony Xperia 2
Ny Xperia 1 dia natomboka tamin'ny fomba ofisialy tany Eropa eo antenatenan'ity taona ity, rehefa natolotra tamin'ny volana feb. Ny avo lenta vaovao an'ny marika Japoney, izay nisafidy ny hanova ny volavolan'ny findainy. Na dia tsy tao amin'ny magazay efa ela aza ity modely ity, efa novinavinaina amam-bolana maro izay izay handimby azy, ny Xperia 2, tsy ho ela intsony.
Andrasana noho izany ity Sony Xperia 2 ity dia haseho amin'ny IFA 2019 ao anatin'ny andro vitsivitsy. Saingy tsy mila miandry isika vao hahita ny sary voalohany an'ity telefaona vaovao ity avy amin'ny marika Japoney. Ka azontsika atao ny mahita ny volavola hamelana antsika amin'ity raharaha ity.
Ny volavolan-tsarimihetsika 21: 9 hitantsika tamin'ny taranaka voalohany dia hitazona an'ity raharaha ity. Ny Sony Xperia 2 dia hitazona lafiny sasany hitovizany amin'ilay maodely hitantsika tamin'ny volana feb. Maneho fiovana ho an'ny marika izany, ka mitady hampiasa an'io karazana endrika io amin'ny maodely vaovao izy ireo.
Amin'ny lafiny iray aminy dia hitantsika ny bokotra iray, izay mety ho sensor amin'ny dian-tànana, ary koa bokotra iray hampiasana ny fakan-tsarin'ny fitaovana, bokotra iray amin'ny iray ihany amin'ity tranga ity. Aiza no ahitantsika ny fanovana sasany dia ao ambadiky ny fitaovana.
Hatramin'ity aorian'ny Sony Xperia 2 ity dia afaka mahita izany isika ny fakantsary dia miorina amin'ny iray amin'ireo sisiny. Ny maodely tany am-boalohany dia nametraka azy ireo teo afovoany, noho izany dia misy fiovana amin'ity tranga ity. Ankoatr'izay, antenaina fa ho hafa ihany koa ny sensor ampiasaina amin'ity tranga ity. Saingy amin'izao fotoana izao dia tsy misy antsipiriany momba azy ireo.
Ny famaritana an'ity Xperia 2 ity dia tsy fantatra amin'izao fotoana izao. Mety misy fivoahana alohan'ny IFA 2019. Na dia izany na tsy izany dia fohy dia fohy ny fiandrasana amin'ity lafiny ity. Ka afaka andro vitsivitsy dia ho afaka hihaona amin'ity fitaovana Sony vaovao ity isika ka hahafantatra ny zava-drehetra.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » Sony » Navoaka ny sary voalohany an'ny Sony Xperia 2
Nokia dia mivarotra telefaona telo heny mihoatra ny finday avo lenta